Toamasina: nahomby ny « Carnaval de Noël » | NewsMada
Toamasina: nahomby ny « Carnaval de Noël »
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny 20 desambra teo ny fety be karakarain’ny orinasa tsy miankina, Rasolo Export sy ny fikambanana Tamiagna, izay tarihan’ny mpandrindram-paritra Sabotsy José. Raha ny nambaran’ito farany, « Nahomby ny fanokafana ny « Carnaval de Noël » ». Raha ny fanazavany, tsy mbola nisy ravaka sy haingo tahaka izao ny tanànan’i Toamasina indrindra teo anoloan’ny Lapan’ny Tanàna.
Amin ‘izay maha fety be azy izay, mahatratra ampolony ny fiara sy moto hozaraina amin’ny alalan’ny tombola hatramin’ny alahady fotoana hamaranana ny lanonana. Eo ihany koa ny kilalao aman’arivony ho an’ny ankizy ary tsy latsa-danja ny fampisehoana antsehatra ataon’ ireo mpanankato maro samihafa, jiro manjelanjelatra hakana sary ho fahatsiarovana manginy fotsiny
Nandritra ny lanonam-panokafana ofisialy, tetsy anoloan’ny Lapan’ny Tanàna no nilazan’ny mpandrindram-paritry ny Tamiagna fa « vita izay ny resaka politika ary tsara raha miala voly sy miatrika fety amin ‘izay ny tsirairay. Maka aina norerahin’ny fampielezan-kevitra ary hiandrasana ampitoniana ny voka-pifidianana ».